လွန်လွန်းတယ်ဗျာ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Complaint / Claim » လွန်လွန်းတယ်ဗျာ	14
Posted by nicolus agral on Jun 22, 2012 in Complaint / Claim | 14 comments
ဒီနေ့လမ်း၃၀မှာ ဆေးသွားဝယ်တယ်ဗျာ
ဆိုင်ကယ်ကို ခဏလေးရပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ ဆေးရှိမရှိလှမ်းမေးတာ
အဲဒါကို ယဉ်ရပ်နားခတဲ့ လာတောင်းတာ
အိမ်ရှိတော့ မြေခွန် အိမ်ခွန် ရေခွန် အမှိုက်ခွန် လမ်းခွန် လမ်းမီးခွန် မီတာထိမ်းသိန်းစောင့်ရှောက်ခ
ဆိုင်ကယ်ရှိတော့ ရောင်း/ဝယ်ခွန် ဘီးလိမ့်ခွန် ရပ်နားခွန်
ငါတို့ များကြ ဆောင်လိုက်ရတာ ဆုံးကိုမဆုံးနိုင်ဘူး
အခွန်ဦးစီးကကြေငြာတဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ဆောင်သူစာရင်းမှာ Top သူဌေးတယောက်မှမပါဘူး
nicolus agral has written 39 post in this blog.
water-melon says: ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကမဆင်းရင်
nicolus agral says: (တစ်ချို့တောင်းတဲ့ကောင်တွေကရင့်တယ်)
ငယ်ငယ်ကစိတ်နဲ့ ဆိုလို့ ကတော့ တပွဲပဲ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 299
ချစ်ရင်ထူးနှစ် says: အဲ.. ပြောမနေပါနဲ့ဗျာ အစထဲကအခွံပါဆိုမှ အနှစ်မှ မရှိတာ ..
mocho says: စနစ် တကျ မဖြစ်တဲ့ အခွန် တွေ က တော် တော် ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ် ဆောင် လိုက် တဲ့ အခွန် တွေ က နိုင် ငံ တော် အတွက် အမှန် တကယ် မဖြစ် လာတာက ပို ဆိုးပါတယ်။
နွေဦး says: ရန်ကုန်တော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်….
ယာဉ်ရပ်ခ မပေးရတဲ့အပြင် လဘက်ရည်ပါသောက်သွားကြသေးတာဗျ ..။
the best says: ရန်ကုန် စည်ပင်က လုပ်စားနည်း တစ်ခုပါ။
ကန်ထရိုက် နဲ့ဂွင်ရိုက်ပြီး ဈေးမတန်တဆတင်တယ်။
များများတင်လေ သူတို့ တွက်များများ တောင်းစားလို့ ရမယ်လေ။
ကန်ထရိုက်က တဆင့် ဆပ်ကန်ထရိုက်တွေထပ် ပေး၊
ဆပ်ကန်ထရိုက်က တခါထပ်ပြီး ဆပ် ဆပ်ကန်ထရိုက်တွေပေး။
ဆပ် ဆပ်ကန်ထရိုက်တွေက ငွေလိုက်တောင်းရတော့
မြို့ တော်ဝန်ကမသိတာလား။ သိသိနဲ့လွှတ်ထားတာလား။
ချစ်ရင်ထူးနှစ် says: အဲဒါဆို ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် မီတာ ကို ချိတ်ထားပြီးတော့ ထိမ်းသိမ်းခ ဆိုပြီး 1000 အလာကား နေရင်း ပေးနေရတာရော ..
the best says: nicolus agral ရေ
လမ်း(၃၀)မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလို့ ရလို့ လား။
ွှ မန္တလေး က လား။ ရှင်းပါအုံး။
water-melon says: မန်းလေးပါ the best ရေ
the best says: ရန်ကုန်အတိုင်းပါပဲလား။
nicolus agral says: မန်းလေးမှာပါ
(အဲဒါဆို ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် မီတာ ကို ချိတ်ထားပြီးတော့ထိမ်းသိမ်းခ ဆိုပြီး 1000 အလာကား နေရင်း ပေးနေရတာရော ..)
ပြန်လာတော့ မီတာခ ၀ ကျပ်
သားဦး၊မြေးဦး says: တလောက အခွန်တိမ်းရှောင်ထားမှုတွေ back date နဲ့ လာတော့မယ်ကြား
ဖိုးထောင် says: ဟဲ့ဒုက္ခပဲ ငါလဲ အခွန်အမြဲတမ်းရှောင်တယ် (အမှိုက်ပုံနားနီးလို့)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 207
kokothandar says: လိုင်စင်ရုံးမှာ ကထည်းက မျှတတဲ့ ပျမ်းမျှနှုန်း ကောက်လိုက်ရင် သင့်တော်မယ်။ ကားအားလုံးမြို့ထဲကို
နေ့တိုင်းမရောက်ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးလေလံပစ်လို့ ရထားတဲ့ ငွေပမာဏ နှုန်းကို ရန်ကုန်လိုင်စင်
ကားစီးရေနဲ့စားပြီး ကျသင့်ထာ လိုင်စင်ရုံးကကောက်ပြီး စည်ပင်ကိုလွှဲပေးရင် လေလံတစ်ဆင့် ပြန်
ဆွဲသူတွေရဲ့ မတရား အကောက်နေရတဲ့ဒုက္ခတစ်ခု ကနေ ပြည်သူတွေလွတ်ပြီပေါ့
Comments By Postကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု - Foreign Residentမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Nyo Win - may julyကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mr. MarGa - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်လူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မောင် ပေ - Mr. MarGaFloral Gift - Macro Series - Mr. MarGa - မဟာရာဇာ အံစာတုံးနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - မောင် ပေ - Foreign Residentမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Mr. MarGa - may julyဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - Mr. MarGa - ဆူးဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Mr. MarGa - kaiအတု - Nyo Win - ကြက်အူလှည့်စိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - ကြက်အူလှည့် - kyeemiteဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - kyeemite - padonmarရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - Mr. MarGa - padonmarလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - နွေဦး - ဆူးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - Foreign Residentခရီးသည်လေးသို့ - nway kyu - marblecommetEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities